Ôseania - Wikipedia
I Ôseania dia kôntinenta izay fitambaran' i Aostralia sy ny nosy anarivony maro manodidina ao amin' ny faritra atsimon' ny ranomasimbe Pasifika. Ahitana firenena miisa 14 ny ao Ôseania. Hita ao i Aostralia, i Zelanda Vaovao, i Papoazia, i Ginea Vaovao, Tasmania, i Melanezia, i Mikrônezia, i Pôlinezia, i Haoay. Ny nosy sy ny tamba-nosy sasany dia mifanalavitra dia mifanalavitra (anarivony kilômetatra). Manana velarana 8 523 655 km2 eo ny kôntinentan' i Ôseania. Ny 90 %n' izay dia i Aostralia. Izy no kôntinenta kely indrindra eto an-tany.
Sarin-tany maneho ny fizaràm-paritr' i Ôseania.
1 Fizaram-paritra any Ôseania
2 Fiteny any Ôseania
3.1 Ireo kontinenta
Fizaram-paritra any ÔseaniaHanova
Mizara faritra efatra i Ôseania, dia i Mikrônezia, i Melanezia, i Pôlinezia ary i Aostralazia.
I Mikrônezia dia vondro-nosy any Ôseania, izay ahitana ireto fanjakana sy faritra ara-pôlitika ireto:
ny Fanjakana mizakatenan' i Mikrônezia;
ireo nosy Marshall;
ireo nosy Mariana Avaratra (miankina amin' i Etazonia);
i Wake (miankina amin' i Etazonia);
i Guam (miankina amin' i Etazonia);
I Melanezia dia vondro-nosy telo lehibe ao amin' i Ôseania, izay ahitana ireto fanjakana sy tany manaraka ireto:
ireo nosy Fidji;
i Kaledônia Vaovao;
ireo nosy Salômôna,
i Ginea Vaovao izay mizara roa: i Papoazia-Ginea-Vaovao sy i Ginea Vaovao Andrefana (izay an' i Indônezia sy mizara faritany roa: Papoazia sy Papoazia Andrefana).
I Pôlinezia dia faritra ao amin' ny tapany atsinanana amin' i Ôseania,
izay ahitana fanjakana mahaleo tena fito:
ny nosy Cook,
i Zelanda Vaovao,
ary i Tovalo;
sy tany tsy mahaleo tena telo ambin' ny folo:
i Haoay, Samôa amerikana, i Johnston, i Baker, i Howland, i Jarvis, i Palmyra (miankina amin' i Etazonia);
Pôlinezia frantsay, Wallis-et-Futuna (miankina amin' i Frantsa);
ny nosy Chatham, Tokelau (miankina amin' i Zelanda Vaovao);
ireo nosy Pitcairn (miankina amin' ny Fanjakana Mitambatra);
ny Nosin'ny Paska (miankina amin' i Sily).
I Aostralazia dia faritra any Ôseania izay tsy voafaritra mazava tsara nefa amin' ny ankapobeny ahitana an' i Aostralia sy i Zelandy Vaovao, nefa ahitana koa indraindray an' i Ginea Vaovao sy ny nosy manodidina azy.
Fiteny any ÔseaniaHanova
Ny fiteny any Ôseania dia ireo hita indrindra ao amin' ny vondrona telo lehibe: fianakaviam-piteny aostrôneziana, fitenin' ny tompon-tany ao Aostralia ary ireo fiteny papoa. Ny mpanjana-tany koa dia nitondra ny fiteniny tao amin' io faritra io, indrindra ny fiteny anglisy sy ny fiteny frantsay.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Ôseania&oldid=1038644"
Dernière modification le 8 Oktobra 2021, à 08:37
Voaova farany tamin'ny 8 Oktobra 2021 amin'ny 08:37 ity pejy ity.